Led Corn Lamp, Corn Cob Led Light, Corn Cob Led Manufacturers na Suppliers na China
Nkọwa:Led Corn Lamp,Ọkụ Ndị Na-agba Ọkụ,Ọka Kasị Ọkụ,Mkpụrụ Igwe Ọkụ,,
Home > Ngwaahịa > Led Corn Bulbs > Led Corn Lamp
Ngwaahịa nke Led Corn Lamp , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Led Corn Lamp , Ọkụ Ndị Na-agba Ọkụ suppliers / factory, wholesale high-quality products of Ọka Kasị Ọkụ R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
150w Led Corn Cob Bulb Bulb 19500lm  Kpọtụrụ ugbu a
120 Watt Led Corn Bulb Lamp 15600lm  Kpọtụrụ ugbu a
100 Watt Led Corn Light Lamp 13000lm  Kpọtụrụ ugbu a
480v Led Corn Cob Ọfụma kwesịrị ekwesị 60W E27  Kpọtụrụ ugbu a
480v 40w Led Corn Bulb E39 E40  Kpọtụrụ ugbu a
30W E27 Ọka Kpị na-acha ọkụ ọkụ 4000K  Kpọtụrụ ugbu a
30W Led Corn Light Bulb maka HPS 100W  Kpọtụrụ ugbu a
50W Led Corn Bulb 175W Metal Halide Equivalent  Kpọtụrụ ugbu a
DLC Led Corn Light 60W maka ebe ụgbọala ụgbọala  Kpọtụrụ ugbu a
60W Led Corn Light Light E27 7200LM  Kpọtụrụ ugbu a
E40 40W Led Corn Light Bulb 4800LM  Kpọtụrụ ugbu a
40W Ogwe ọka 100W Ọkpụkpụ na-agbanwe ihe  Kpọtụrụ ugbu a
E27 80 Watt Led Corn Lens Frosted Lens  Kpọtụrụ ugbu a
60W Okpokoro Uhie Okpukpo a na-ekpuchi ihe otiti nke 175  Kpọtụrụ ugbu a
ETL Pyramind Led Corn Lamp 30W  Kpọtụrụ ugbu a
Okpokoro Osisi 150w bụ 19500Lm 4100k 5000K na oghere E27 E39, nhata 500B na bọlbụ MH HPS. Ntughari ala ala ala na ikpo ọkụ na-enyere aka nkwụsịtụ ọkụ, na-eme ka Led Corn Bulb 150w dị elu ruo awa 50000. E ji ya rụọ ọrụ nke alammadụ na-adịgide adịgide...
Led Corn Lamp 120w bụ 15600Lm 4100k 5000K na oghere E27 E39, nhata 400B Mb HB na MH HPS. Ntughari nke ala ala ala na ikpo ọkụ na-enyere aka nkwụsịtụ ọkụ, na-eme ka okpukpu 120 Watt Ọkụ ahụ dị elu ruo awa 50000. Emere nke alamini na ugbo elu bu ihe...
Ejiri Ọkụ Kwara 100w bụ 13000Lm 4100k 5000K na E27 E39, hà 300W incandescent bulb na MH HPS. Ntughari ala ala ala na ikpo ọkụ na-enyere aka na-ekpochapu ọkụ, na-agbanye ọwa mmiri nke 100 Watt a ka ọ dị ruo 50000 awa. Emere nke alamuma ugbo elu bu...
Okpokoro Uhie 60W E27 bụ 7800Lm 5000K na oghere E27 E39, nhata 175W incandescent bulb na MH HPS. Ntughari nke ala ala ala na ikpo ọkụ na-enyere aka ikpochapu ọkụ, na-agbasapụ okpukpu 60W nke ọka dịka ihe ruru oge 50000. Emere nke alamini ugbo elu bu...
Onu ogugu nke kpochapu ogugu nke ogugu nke ogugu abia na I9 bụ 5200Lm 5000K na oghere E27 E39, nhata 120B na bọtịnụ na MH HPS. Ntughari ala ala ala na ikpo ọkụ na-enyere aka ịkwụsị ikpo ọkụ, na-agbatị oge 40W Led Corn Cob 480v ruo 50000 awa. Emere...
Okpokoro Osisi 30W nke Ọkụ bụ 3900Lm 5000K na oghere E27 E40, nhata 100B Mb HB na MH HPS. Ntughari ala ala ala na ikpo ọkụ na-enyere aka na-ekpochapu ọkụ, na-eme ka okpukpu 30W ọka Cob na- agbatị ruo oge 50000. Emere nke aluminum aviation ndị ọzọ...
Ọnụahịa otu: USD 16.9 - 17.9 / Piece/Pieces
Bbier 30W Led Corn Bulb bụ 3600Lm 5000K na E27 E40 anya, hà 100W incandescent bulb na MH HPS. Ntughari ala ala ala na ikpo ọkụ na-enyere aka na-ekpochapu ọkụ, na-agbasa ume nke 30W Led Corn Light Bulb ruo awa 50000. Mere nke aluminum ụgbọelu ndị ọzọ...
Ọnụahịa otu: USD 31.99 - 33.99 / Piece/Pieces
Bbier na-enye akwa elu mmepụta 50W Led ọka bọlbụ nnọchi maka omenala 175W HPS, Metal Halide na CFL bulbs. Nke a dị 175 watt metal Halitere Led kwesịrị ekwesị na- egosipụta ihe karịrị 7500 Mpempe akwụkwọ mmepụta. Anyị 175 Watt Led Bulb na-arụ ọrụ...
Nke a Led Corn Light 60W bụ ihe mgbapụta na -ezipụ ụda ballast na-enyefe sara mbara, ọbụna nkesa ìhè mgbe eburu Led Corn Bulb 60W na HID post top Fixtures Bbier nke 60 Watt Led Corn Bulb dị mfe iji wụnye, rerofits a pụrụ ịdabere na ya na-enye ike...
Ọnụahịa otu: USD 22.99 - 24.99 / Piece/Pieces
Okpokoro Osisi 60W Led nwere ike ịchekwa ihe ruru 90% na ọkụ eletrik ma e jiri ya tụnyere nnukwu nsogbu sodium ọkụ. 60W Led Corn Light nwere elu 7200 Lumens ma nwee ike dochie anya 175 watt metal Halide / HID / HPS. Igwe Mmiri E27 a na-eme ka mmiri...
Bbier 40W Led Corn Bulb dị ka bọmbụ 120W, 4800 lumen na-egbuke egbuke, ị na-echekwa ruo pasent 80 nke ọkụ eletrik na-akwụ ụgwọ iji tụnyere ìhè ọkụ. Nke a 40W Led Corn A na-eme ka ọkụ dị ọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ iji hụ na ikpo ọkụ na nkwụsị dị mma...
Bbier 40W Okpokoro Ọkụ bụ maka mgbidi ballast gafere nnukwu mmiri, n'ọnụ mmiri dị ala ma ọ bụ ngwa post. A ghaghị ịgafe ihe nkedo mgbe ọ dị. Nke a 40 Watt Led Corn Bulb r gosipụtara 100W HID, 100W fluorescent na 100W incandescent. The d irect...
E27 80 Watt Led Corn Lens Frosted Lens
Ọnụahịa otu: USD 33 - 35 / Piece/Pieces
MGBE Ị GA-EME: Ịchebe 85% na ego gị! Bbier 80W Ọkụ ọka na- enye ezigbo ngbanwe nke 250w na-enye gị ohere site na ntanye ọkụ 80 watt. MGBE A GA-EKWU NDỊ: 80 Watt Led Corn Light nke a pyramid zuru okè maka iji ya mee ihe na mgbochi ndị nwere ike...
Ọnụahịa otu: USD 31.99 - 32.99 / Piece/Pieces
175W Ọkpụkpụ Ngwá Agha nke Ọkara : Kwesịrị ekwesị maka ihe eji emechi emechi. Mee ka ọ bụrụ na ị na-eme! 175 Watt Metal Halide Led Retrofit : ETL & DLC listed.Our ETL depụtara 175 Watt Led Equivalent izute niile iwu chọrọ. 175 watt na-eduzi...
Ọnụahịa otu: USD 22 - 24 / Piece/Pieces
Ọdịdị dị mma na ike ịzọpụta: Nke a Led Corn 30W bụ 9000Lm maka mgbanwe 100b nke ọkụ na-emepụta bọtịnụ. Ọdụm Ọkụ 30W Led dị nnọọ ike ma chekwaa ụgwọ ọkụ eletrik gị. Imirikiti ìhè: Ọdụm 30W Ọkụ adịghịzi na-echere ụdị ikuku ụdị anụ ọhịa ochie na-ekpo...
China Led Corn Lamp Ngwa
Ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ na -agbanwe ụzọ anyị si eche banyere ọkụ ọkụ. Led Corn Lamp bụ nnukwu nnọchi maka ụgbọala ọtụtụ ọkụ. Rụgharịa oge nchedo HID gị n'oge gara aga site na ịrụ ọrụ ike nke ọma Coc Led Light for high bays, low bays, post above, mini post top, and PAR 38 fixtures . Ọka Kasị Ọhụụ maka Ọhụụ Obodo nwere nnukwu arụmọrụ ma nwee obere ụgwọ mmezi .
Led Corn Lamp Ọkụ Ndị Na-agba Ọkụ Ọka Kasị Ọkụ Mkpụrụ Igwe Ọkụ Led Corn Lamp E40